Current fanaraha-maso fifandimbiasana DZB-1 - China Feinade elektrika Appliance
Compressor hafanana CJ-maso 5-10
WB-X76 LED Display tarehimarika voltmeter
Surge tselatra Mpiaro LY1-D20
Dingana-filaharan'ireo dingana-fatiantoka fampitàna JFY-5-3
Current fanaraha-maso fifandimbiasana DZB-1
Motor fiarovana fifandimbiasana, Current mamantatra fifandimbiasana
Aza atrehinao ireo olana ireo?
1. Alarms izany intsony alohan'ny fitaovana no simba.
2. Fiarovana ilaina noho ny mahantra hery famatsiana kalitao
3. Ny maotera Matetika no fanatitra ho an'ny toerana misy anao dingana, izay mamokatra avo vidin'ny fikojakojana.
4.The vano maotera matetika fanatitra ho an'ny be loatra, izay miato ny drafitry ny famokarana sy ny maka fotoana be loatra mba disassemble sy hivory.
5. Ny matetika nanomboka compressor sy ny fohy-contactor faritra mahatonga toerana misy anao na ny dingana fifandanjan'ny dingana izay mitondra mankany fanakatonana ny fitaovana ary dia toy izany mahakasika ny fanaterana ny fotoana.
6. Ny paompy rano matetika sy drily idles mampody izay mahatonga trotraka ny maotera, mitondra ny fitarainana maro momba ny kalitaon'ny ny paompy avy amin'ny mpanjifa.
7. Ny fitaovana mandeha ratsy amin'ny misasakalina, ka avy eo dia miasa tsara rehefa tsy momba mba hitsapana ny olana, ka tsy sarotra ny mahita ny antony sy hamaha tanteraka ny olana.
8. Rehefa mampiasa ny maotera mpiahy na mafana be loatra ny fifandimbiasana atao amin'ny iray hafa mpanamboatra, ny maotera avy dia mbola nandoro noho ny miadana valinteninao sy ny tsy mahomby ho an'ny fiarovana.
9. Sarotra ny mifidy mpiaro marina ho an'ny maro samy hafa habe ny Motors, raha mbola manana ny maotera ilainao manokana noho ny lisitra voafetra, vokatr'izany ho fitaovana nampiasaina loatra. Izany koa dia manahirana installers izay tsy maintsy maka fotoana be loatra mitady ny habeny sy ny modely mifanaraka amin'izany.
10. Ny maotera manomboka amin'ny avo amin'izao fotoana izao, izay mety hitarika ho diso fiasan'ny ny mpiaro.
Main Products: Dingana-filaharany fampitàna, Motor Mpiaro fampitàna, tarehimarika ammeter / voltmeter, helatra Surge Mpiaro, Compressor mari-pana-maso
Kevitra: Current fampitàna
Arovy Feature: voaisy kase
Fanaraha-maso Andraikitra: Over & ambany amin'izao fotoana izao, mihidy Fanodina, dingana very, Over & Undervoltage
Endri-javatra: Intergrative rafitra
MARIDREFIN'NY: CODE & lela fanaovan-jiro LED
Misy laharana TOSIKARATRA: AC220V AC380V
Output Contact: 1D / O ny diany, 1D / O for fanairana
Contact fahaiza: 3a 380VAC
Fitomboan'ny: Panel & Sokiro manamboatra
Certifications: AK ROHS ISO9000
3.1 Key Specifications / Special Features
Misy laharana malefaka 220VAC, 380VAC, 50 / 60HZ
Current isan-karazany 1-10A, 5-50A, 10-100A, 80-200A 200-400A, 400-600A, 600-800A
Proective asa voahidy-Fanodina, overcurrent, undervurrent, dingana very, dingana unbalance, overvoltage, undervoltage,
tsy voatery asa RS-485 fifandraisana seranan-tsambo 4-20mA Analog output
tondro LED manondro malefaka, amin'izao fotoana izao, hetsika sata
Output Contacts 1D / O ny diany 1D / O for fanairana
Contact fahaiza- 3a 380VAC
Dimensions (H * W * D) 18*54*135mm
fitomboan'ny Sokiro manamboatra
TOSIKARATRA fifandimbiasana dia fitsipika seaworthy fonosana,
1pcs olona boaty na 5pcs ao anaty boaty afovoany,
100pcs isaky ny baoritra.
Base teny nindramina dia fotsy fonosana.
OEM famolavolana azo ekena.
Ny teny dia Payment T / T, Aliexpress, Western Union, PayPal, Money gram, L / C amin'ny fahitana.
Delivery Details: ao anatin'ny 30-50days rehefa avy nanamarina ny lamina
Taorian'ny-varotra fanompoana: azo antoka
Product quality: azo antoka
Communication fahaiza-miasa mahomby: fifadian-kanina
Logistics Price: levitra
Transport fotoana: fifadian-kanina
Isan-karazany isan-karazany: feno
Company laza: tsara, tena tsara,
Same dikan-vokatra: fisafoana fandoavam-bola
Fanaraha-maso orinasa fepetra takiana: OK
1.Can no manome ny santionany tena eo anatrehan'ny filaminana?
2. Afaka fomba amam-panao-nanao vokatra ho antsika ho toy ny santionany?
3. Inona no tombony misy ato aminareo?
4. Inona ny tena vokatra?
–We are 100% focus on Automation Products Voltge Monitoring Relay, Motor fiarovana hanazava , volt-ammeters, misamboaravoara mpiaro, mari-pana mpitandrina.
5. Azonao printy amin 'ny famantarana?
6. Mandra-pahoviana no toetra antoka?
8. Inona no teny fandoavam-bola?
Previous: ODM Supplier 11.6” Hd Mount Car IPS Lcd led Monitor With 12V Dc Input
Next: Current fanaraha-maso fifandimbiasana JFY-701
As Current Sensor fampitàna
Current Control fampitàna
Current Fanaraha-maso notantarain'ilay
Current Hiarovana: notantarain'ilay
Current fampitàna Motor Arovy fampitàna
Current Tsikariny fampitàna
Current mpanova ara fampitàna
Hafanàm-po an Electronic Overcurrent fampitàna
Hafanàm-po an Motor Fiarovana fampitàna
Hafanàm-po an Over Current fampitàna
Hafanàm-po an be loatra fampitàna
Digtal be loatra fampitàna
Electric Motor be loatra fampitàna
Electronic Motor Fiarovana be loatra notantarain'ilay
Electronic Fiarovana fampitàna
High Current fampitàna
Over Current Hiarovana: notantarain'ilay
Over Current notantarain'ilay
Overcurrent Fiarovana notantarain'ilay
be loatra Electronic mafana fampitàna
be loatra Protetion fampitàna
Fiarovana Overcurrent fampitàna
Fiarovana Relaysgsm Remote Control fampitàna
Pulse Control fampitàna
Reverse Power fampitàna
Sensor Module As Current fampitàna
teo ambany Current Fiarovana fampitàna
TOSIKARATRA Regulator hanazava
TOSIKARATRA Tsikariny fampitàna
Current fanaraha-maso fifandimbiasana JLW-180
Dingana-filaharan'ireo dingana-fatiantoka fampitàna ND-380